Toyota Wish 2003 (#617130) ကို Tamwe မြို့နယ်တွင်ရောင်းရန... | CarsDB
Lot Number: #617130
2003 Wish Z grade
2000cc , D4 engine , VSC
7 seaters , အလယ်​​လျောက်​လမ်း ,
TRC control , modified bumper
LED ​နောက်​မီး , 90% ​အော်​​ဆေး .
TV backcam . 3D/****
Pearl White . လက်​တင်​စီး , လိုင်​စင်​ အသစ်​ .
207 သိန်း .
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) ID Car Service မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Wish 2003 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။